Ku deeq Waddooyinka Muhiimka ah ee Dutchtown • DutchtownSTL.org
Ku noqo deeq bixiye Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown! Doollar kastaa wuxuu ka caawiyaa Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown xagga himiladeenna ah inaan u dhisno Dutchtown kobcaya dhammaan degganeyaashayada, milkiilayaasha meheradaha, iyo daneeyayaasha kale.
Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown ayaa sidoo kale hadda bixiya fursad ay ku sameeyaan deeqaha bil kasta soo noqnoqda! Dhagsii badhanka "Sii wadida Deeqaha" waxaan si otomaatig ah u heli doonnaa intaad dooratay bil kasta.
Waddooyinka Weyn ee Dutchtown waa 501(c)(3) urur aan faa'iido doon ahayn. Deeqahaagu waxa laga yaabaa in cashuur laga jarayo - la tasho xirfadlayaashaada cashuuraha.
Ka Akhri Shaqada Waddooyinka Waaweyn ee Dutchtown
Sanadkii 2020 -kii oo dhan iyo in kasta oo uu jiro masiibo caalami ah, Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waxay heleen dardar cusub, waxay soo jiiteen mutadawiciin cusub, waxay heleen habab cusub oo ay ku taageeraan bulshadeena ganacsiga, waxayna sii wadeen inay dhisaan Dutchtown ka wanaagsan. Waad awoodaa aqriso sanadkeena dib u eegis or kala soo bax nooc PDF ah.
Siyaabo Kale Oo Loogu Deeqo
Haddii aad doorbideyso inaad ku dirto deeqdaada, u dir jeeggaaga lagu bixin karo “Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown” cinwaanka soo socda:
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa wareejin toos ah adoo adeegsanaya PayPal adoo lacag u diraya pay@dt2stl.org. Ku-deeqidda qaabkan ayaa naga wada badbaadineysa khidmadaha dheeraadka ah.
Haddii aad u baahan tahay inaad sameyso qorsheyaal kale oo aad ku bixiso tabarucaada, fadlan haka waaban nala soo xiriir.
Miyaanay Awoodin Bixinta Lacag Caddaan Ah?
Waa caadi! Weli waan isticmaali karnaa gargaarkaaga. Sida ugu wanaagsan ee lagu caawin karo waa ka mid noqoshada guddi, meesha aad ku biirin karto fikradahaaga, jawaab celintaada, iyo xirfadahaaga. Haddii ay jiraan siyaabo kale oo aad jeclaan lahayd inaad uga qayb qaadato waqtigaaga iyo tamartaada, fadlan nala soo xiriir oo meel baan kuu helaynaa.
Markii hore loo yaqaanay DT2
Haddii aad ku tabarucaysay DT2, ha ka welwelin - Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waa magac cusub oo keliya iyo horumar ka dhashay isla ururkii. Qaar ka mid ah bayaannada kaarka deynta ayaa laga yaabaa inay weli ka tarjumayaan magaca DT2 markaan sii wadno cusbooneysiinta barnaamijyadeena.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay March 8th, 2022 .
DutchtownSTL.org Ku deeq Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown